Momba anay - Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd.
Beijing Hengqianxiang International Trade Co., Ltd. izay hita tamin'ny Sep 2012, dia fitambarana endrika, famokarana ary varotra ho fampidirana orinasa matihanina lehibe. Ny orinasanay dia manana rafitra famokarana matotra sy rafitra fitantanana. Manana orinasa maro miara-miasa maharitra koa izahay, mety amin'ny fanaraha-maso sy fandefasana ny entana izy ireo. Ny orinasanay dia manana traikefa roa-polo taona ho an'ny famolavolana, ny famokarana ary ny varotra miaraka amin'ny fitaovana mialoha, ny haitao mahafinaritra ary ny fomba am-boalohany. Manana marika matotra mahaleo tena maromaro izahay, "ZHANSHI", "EAST ELEPHANT", "GUIDE BIRD" sns, ny vokatra dia mivarotra tsara any ivelany.
Ny akanjon'ny orinasan'ny orinasanay dia mifototra amin'ny palitao mitafy, palitao, palitao baomba, akanjo vita amin'ny volon'ondry, palitao pu ary mpamaky rivotra sns. Ny fanomezana lanja ny laharam-pahamehana amin'ny fametrahana kalitao sy ny lamaody lamaody, ny vokatray dia malaza amin'ny fikatsahana lamaody sy ny kalitaon'ny vondrona mpanjifa mahatoky, amidy tsara any Amerika Avaratra, Eoropa ary Afrika Atsimo.
Ny orinasanay dia mandroso hatrany ny tsena vaovao, ny vokatra vaovao, ny fampiharana ny teknolojia vaovao, ny fampidirana ireo singa lamaody iraisam-pirenena vaovao, ny fahazoana ny firoboroboan'ny akanjo iraisam-pirenena, hananganana "Marika voalohany amin'ny indostrian'ny akanjo iraisam-pirenena"lavitra. Mampakatra ny"fampiononana","fampisehoana avo","zava-baovao"amin'ny famolavolana; manaraka ny"kalitao aloha", "mpanjifa lohalaharana"ho ivon'ny famokarana betsaka; hivarotra amin'ny"fahatsoram-po","tompon'andraikitra","fandreseny-fandreseny". Taorian'ny firoboroboana nandritra ny taona maro, ny orinasa dia manana tsena marin-toerana ankehitriny ary manantena ny fananganana fifandraisana ara-barotra sy fiaraha-miasa maharitra amin'ny orinasanao mendri-kaja. Mino izahay fa amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika dia hamorona lanja sy ho avy mahafinaritra izahay.